दबाइ वर्गीकरण अन्तरराष्ट्रिय प्रणाली दबाइ समूह मा उत्पादनहरु को सबै मूल विभाजन गरेको छ। यो आधार पनि पदार्थ को pharmacological कार्य हो। प्रस्तुत लेखमा तपाईँले एक यस्तो समूह भन्नेछु। यो neuraminidase inhibitors हुन्छन्। तपाईं बाहिर पाउनुहुनेछ सक्रिय सामाग्री आफ्नो आधार हो, साथै प्राप्त आफ्नो व्यापार नाम थाह के।
हामी लागूपदार्थ कुरा अघि, यो pharmacological समूह चिनारी गर्न आवश्यक छ। Neuraminidase - इन्जाइम एक प्रकारको। यो सबै को झिल्ली सतह मा उपस्थित इन्फ्लूएंजा भाइरस। मानव शरीर को एक सेल संग सम्पर्क मा विषाक्त पदार्थ जारी छ। ज्वरो, कमजोरी, टाउको दुखाइ र यति मा: तिनीहरूले लक्षण को उपस्थिति कारण।
Neuraminidase inhibitors भाइरस मा भित्र पस्नु। तिनीहरूले गुणन र स्वस्थ कक्षहरू साथ पछि सम्पर्क रोकन, pathogenic सूक्ष्मजीवहरु को गतिविधि दबाउन। यस्तो लागूऔषधको विकास 1960 मा शुरू भयो। पहिलो यो सम्भव विस्तार भाइरल संक्रमण मा आफ्नो प्रभाव को माध्यम अध्ययन गर्न गरे।
Neuraminidase inhibitors: लागूपदार्थ र आफ्नो सक्रिय सामाग्री
आधुनिक औषधि विज्ञान यस्तो कार्यहरू द्वारा विशेषता सकिन्छ कि दुई मुख्य लागूपदार्थ किन्न प्रदान गर्दछ। आफ्नो व्यापार नाम "Tamiflu" र "Relenza"। दुवै उत्पादनहरु रोकथाम र इन्फ्लूएंजा को उपचार, विभिन्न उपभेदों लागि प्रयोग गरिन्छ। Neuraminidase inhibitors मात्र निर्धारण बेचिन्छ। संकेत गर्दा पनि यो अस्पतालमा दबाइहरु को प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ। गर्भवती महिला र सुत्केरी आमाहरू लागि यी दबाइहरु लिन छैन।5वर्ष को उमेर मुनिका बच्चाहरु हुन प्रयोग गर्न Contraindications। गुर्दे र hepatic विफलता परामर्श लागि उपयोग गर्नु भन्दा पहिले विभाजित कारण छ।
यी लागूऔषधको सक्रिय यौगिकों विशिष्ट नाम र प्रशासन को मोड हो। "Tamiflu" चिकित्सा oseltamivir को संरचना मा समावेश छन्। को दवादारू आन्तरिक प्रयोगको लागि particulate सामग्री संग दाना को रूप मा discharged छ। औषधि "Relenza" - यो inhalation हो। सक्रिय घटक zanamivir छ।
कुन तरिकामा neuraminidase inhibitors प्रयोग गरिन्छ (फ्लू)? तपाईंले पहिले नै दबाइ दुवै आफ्नो डाक्टर निर्धारित भनेर थाह छ। को लागूपदार्थ खरिद गर्न तपाईं एक निर्धारण गर्न आवश्यक छ। तसर्थ, औषधिको खुराक र प्रशासन को अवधि सामान्यतया विशेषज्ञ चयन। तर मार्गदर्शन पनि यस विषयमा जानकारी समावेश छन्:
दबाइ "Tamiflu" वयस्क र बच्चाहरु 12 वर्ष पछि एक ट्याब्लेट लागि दुई पटक एक दिन प्रयोग गरिन्छ। पाठ्यक्रम अवधि5दिन छ। 12 वर्षको बच्चाहरु लागि प्राथमिकताको निलम्बन 30-75 मिलीग्राम oseltamivir (शरीर वजन आधारमा) दुई पटक एक दिन को राशि मा प्रयोग गरिन्छ।
"Relenza" चिकित्सा inhalation द्वारा बुझाइएको। पुस्तिका दुई पटक दिनहुँ मिश्रित (2 inhalation) को 10 मिलीग्राम प्रयोग सुझाव दिन्छ।5दिन उपचार जारी। 10 दिनको लागि एक दिन एक पटक लागूपदार्थ 10 मिलीग्राम को प्रयोग को रोकथाम लागि।
प्रभावकारिता र प्रतिकूल प्रतिक्रिया
विशेषज्ञहरु इन्फ्लूएंजा भाइरस को neuraminidase inhibitors को ढिलो उपचार सुरु गरिएको छ अझ प्रभावकारी छन् भनेर भन्न। मा पहिलो लक्षण चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् गर्न त्यसैले आवश्यक छ। डाक्टर निर्धारण भविष्यमा रणनीति गर्न मद्दत गर्नेछ आवश्यक अनुसन्धान गर्ने सल्लाह दिन्छन् हुनेछ। दुवै लागूपदार्थ इन्फ्लूएंजा भाइरस (उत्परिवर्ती सहित) विरुद्ध प्रभावकारी छन्। अन्य antiviral लागूपदार्थ नभई neuraminidase inhibitors उच्च प्रदर्शन देखाउँछ। पहिले नै केही घण्टा पहिलो आवेदन पछि रोगी सजिलो हुन्छ।
यो कि "Relenza" र "Tamiflu" फ्लू, यसको लक्षण र जटिलताहरू व्यवहार अन्य लागूपदार्थको संग संयुक्त सकिन्छ महत्त्वपूर्ण छ। खैर, र दबाइहरु साइड इफेक्ट छ। उदाहरणका लागि, inhaler, "Relenza" सास र bronchospasm को shortness हुन सक्छ। विरलै एलर्जी हुन्छ edema को फारम। "Tamiflu" हालतमा इन्जेस्टेड। पेट दुखाइ, एलर्जी, गुर्दे र hepatic रोग को exacerbation, neuropsychiatric विकारहरु: त्यसैले, यो थप नकारात्मक प्रभाव छ।
Neuraminidase inhibitors इन्फ्लूएंजा भाइरस विरुद्ध लड्न एक महान उपकरण हो। महामारी समयमा, तिनीहरूले रोकथाम गर्न एक दृश्य संग लिएको हुन सक्छ। तर विशेषज्ञहरु अनावश्यक यी औषधिहरू प्रयोग गर्न सिफारिस छैन। साथै, तपाईंले औषधी आफ्नै किन्न सक्दैन। तपाईंको फार्मासिस्ट "Tamiflu" र "Relenza" एक निर्धारण बिना दबाइ किन्न प्रदान गर्दछ भने, तपाईं यसलाई जाली गर्न सकिन्छ भनेर थाहा हुनुपर्छ। यी दबाइहरु को प्रयोग केवल रोग कम हुन सक्छ, तर जीवन खतरामा पार्ने हुन सक्छ। स्वस्थ रहन!
क्षणिक ischemic आक्रमण
इलेक्ट्रनिक रोगी रेकर्ड
अस्थानिक गर्भावस्था: सर्जरी र उपचार
ग्राफिक्स कार्ड AMD Radeon HD 7670M। ल्याप्टप लागि दर्जा कार्ड
नौका: विशेषताहरू, प्रजाति, अवस्था
ठेस - यो ... परिभाषा, लक्षण, प्रकार
उत्पादनहरु को अनुकूलता तालिका - र विरुद्ध
तपाईं के एक Sycamore थाहा छैन? रूख-बाचेको व्यक्ति र मात्र
Openwork कुँद्ने कागज: योजनाहरु र सिफारिसहरू